> Electronics>DeLonghi F28313.BK Roto Fryer ( black )
Food Capacity : 1 kg
Oil Capacity : 1.2 litres
Max Power Consumption : 1800 W
Voltage : 220 - 240 V / 50/60 Hz
Dimensions (WxDxH) : 31 cm x 36 cm x 24 cm
Six Months Services Warranty
Enjoy crispier and tastier food with the De'Longhi Roto Deep Fryer with 1kg food capacity. It will help you to save on oil consumption by using half the oil of normal fryers and give crispier taste every time. No need to worry about hot oil splashing up since the clean oil draining system will make your fear disappear. Besides, non-stick inteiror and dual filtration filters assist with the easy cleanup and odor protection. Your children can also give youahand without causing any problem so you can safely use the fryer even with them around. One benefit that De'Longhi Roto Deep Fryer can give is easy watchout. You don't need to dodge splattering oil cause De'Longhi Roto Deep Fryer comes with windowed lid and outer cool touch handle. It raises and lowers the basket while the fryer lid is closed and that makes it the best ideal product for every household. This product is available now at Shop.com.mm online shopping mall.
နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် De'Longhi မှထုတ်လုပ်လိုက်သည့် Roto Deep Fryer သည် အစားအသောက်တော်တော်များများဝင်ဆံ့သည့်အတွက် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တော်တော်များများကိုထည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အသုံးပြုနေကျ fryer များကဲ့သို့ ဆီသုံးစွဲမှုပမာဏကို တ၀က်အထိလျှော့ချပေးမှာဖြစ်သလို ကြွပ်ရွသောအရသာကိုလည်းပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါသည်။ ဆီပူပေါက်မှာ၊ စင်မှာပူစရာမလိုတော့ဘဲ စိတ်အေးလက်အေးဖြင့် ကြော်ချက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ အထဲရှိ interior ကို မကပ်စေရန်နှင့် dual filtration ဇကာတွေကိုထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူမှာဖြစ်သလို ဆီညှော်နံ့ထွက်ခြင်းမှလည်းကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်အတန်းမြင့်နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် မိမိတို့ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း ကလေးများဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်၍ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာပူစရာမလိုဘဲ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။ De'Longhi Roto Deep Fryer ၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ ဟင်း၏အခြေအနေကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ Windowed lid ဖြင့်ပြုလုပ်ထားရုံသာမက အဆင်ပြေပြေကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက် cool touch handle ပါဝင်သဖြင့် ဆီပူပေါက်မှာပူစရာမလိုတော့ပါ။ ဖွင့်လိုက်၊ ပိတ်လိုက်လုပ်သည်ပေါ်မူတည်၍ အထဲရှိခြင်းတောင်းမှ မြင့်လိုက်၊ နိမ့်လိုက်ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း မရှိမဖြစ်ထားရှိအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm online shopping mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။